संखुवासभा हत्या काण्ड पेचिलो बन्दै, कहाँ पुग्यो अनुसन्धान ? यसो भन्छ प्रहरी – Classic Khabar
September 10, 2021 171
संखुवासभाको मादीमा भएको क्रुर हत्याको अनुसन्धान झन् असहज बनेको छ। घटनाको चुरो पत्ता लाग्नै सकेको छैन। भौगोलिक विकटता, निरन्तर वर्षा, वनजंगल, सञ्चार र यातायातको असुविधा लगायतका कारणले प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन।
प्रहरीका ५ वटा कार्यालयबाट दक्ष, अनुभवी अनुसन्धानकर्ताको टिम अनुसन्धानमा खटिए पनि घटना प्रमाणविहीन बनेको छ। जसका कारण हत्याराको पहिचान र पक्राउ मुस्किल बनिरहेको छ।
घटनाको अनुसन्धान र हत्यारा पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगर, संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय धरान, जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभा र इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरको टोली खटिएका छन्। तर घटना भएको ५ दिन भइसक्दासम्म अनुसन्धानले सही दिशा लिन सकेको छैन।
अनुसन्धानमा सहजीकरण गर्न प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख डीआईजी अरुणकुमार बीसीसमेत खटिएका छन्। उनी बुधबारसाँझ ७ बजेतिर घटनास्थल पुगेका हुन्। बीसीले प्रहरीलाई विभिन्न कोणबाट घटना केन्द्रित गराएका छन्।
निरन्तरको वर्षाले प्रमाण नष्ट गरिदिँदा अनुसन्धानमा अप्ठेरो भएको प्रहरी अधिकारीले बताए। अविरल वर्षाले तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग प्रभावकारी भएन। साथै भौगोलिक विकटता अर्को समस्या छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तत्काल पुग्न सकिँदैन।
घटना भएपछि गत सोमबार बिहान लगभग ९ः३० बजेतिर प्रहरीले थाहा पायो। तर गाउँमै भएको चौकीबाट प्रहरीलाई पैदल हिँडेर घटनास्थल पुग्न २ घण्टा समय लाग्यो। भौगोलिक विकटता छिचोल्दै इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरबाट इन्सपेक्टर योगराज खतिवडा नेतृत्वको टोली दिउँसो ३ः३० बजे र सदरमुकाम खाँदबारीबाट डीएसपी लालध्वज सुवेदी नेतृत्वको टोलीले साँझ ५ बजेतिर मात्रै घटनास्थल पुग्न सफ भएको हो।
जिल्लाको प्रहरीले घटनास्थलको सुरक्षा दिँदै सम्भावित स्थानको निगरानी बढाएर हत्यामा संलग्नको खोजी थालेको थियो। संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय धरानबाट एसपी भीम दाहाल नेतृत्वको टोली राति मात्रै पुग्यो। वृहत अनुसन्धान भोलिपल्ट बिहान अर्थात घटना भएको २४ घण्टापछि मात्रै सुरु भयो। त्यतिबेलासम्ममा घटनास्थलका धेरै प्रमाणहरु लोप भइसकेका थिए। समयमा घटनास्थलमा पुगेर सम्भावित स्थानमा खोजी गर्न नपाउँदा हत्यामा संलग्नहरुले भाग्ने मौका पाएको हुनसक्ने प्रहरीकै भनाइ छ।
वरपर आश्रय लिएर बसेका हत्यारालाई जंगल छिरेपछि लुक्न र उम्कन सहज भएको आशंका छ। घटनास्थलसम्म यातायातको सहज पहुँच नभएको वडाध्यक्ष खेमराज कटुवालले बताए। ‘कच्ची सडक त गाउँसम्म आइपुगेको छ। तर बर्खाका बेला बाटो बिग्रिएर गाडी चल्दैनन,’ उनले भने, ‘घटनास्थलसम्म पुग्न पैदल हिँड्नुको विकल्प छैन।
प्रहरीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई पैदल हिँडेर धेरै समय खर्चनुपर्ने अवस्था छ।’ वरपरका डाँडा र पाखाको अवरोधले घटनास्थलमा संचार सुविधा कमजोर छ। कटुवालका अनुसार मोबाइलको नेटवर्कले प्रभावकारी काम गर्दैन। कुनै कुराको तत्काल सञ्चार गर्न र सूचना पु¥याउन सम्भव नै नहुने उनले बताए। प्रहरी तत्काल पुगेर अनुसन्धान अघि बढाउन नसक्दा हत्यारालाई भाग्न समय पर्याप्त मिलेको कटुवालको भनाइ छ।
घटनापछि शोक र त्रासमा डुबेको गाउँमा आतंक छाएको वडाध्यक्ष कटुवालले बताए। गाउँलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनका लागि अपराधीलाई जतिसक्दो चाँडो पक्राउ गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
‘भौगोलिक जटिलता, निरन्तरको वर्षा, यातायातको असुविधा, संचारको कमजोर उपलब्धताले अनुसन्धानलाई असर गरिरहेको छ,’ अन्नपूर्णसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी बीसीले भने, ‘तर रेनकोट ओढेर र गम्बुट लगाएर रुझ्दैभिज्दै भए पनि प्रहरीले मिहिनेत गरेर अनुसन्धानका सबै पाटोलाई केलाइरहेको छ ।’ घटना प्रहरीको पहिलो एवं उच्च प्राथमिकतामा परे पनि अहिलेसम्म परिवारै सखाप बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभेटिएको उनको भनाइ छ।
संवेदनशिल घटनालाई निस्कर्षमा पु¥याउन समय लाग्ने हुँदा धैर्य हुन र संवेदनशिल बन्न उनले सबैमा आग्रह गरेका छन्। सबै विधिको प्रयोग गर्दै विभिन्न कोणबाट मिहीन ढंगले अनुसन्धान भइरहेकाले आशावादी हुने अवस्था रहेको बीसीले बताए ।
‘विभिन्न हिसाबले प्रमाणहरु जुटाउने काम हुँदैछ,’ उनले भने, ‘दुर्गम एवं विकट क्षेत्रमा घटना भएकाले समय लागे पनि जतिसक्दो चाँडो अनुसन्धान टुंग्याएर उपलब्धिलाई सार्वजनिक गर्ने छौँ ।’ संवेदनशिल एवं दर्दनाक घटनामा मौसमदेखि भूगोलले पनि साथ नदिँदा अनुसन्धानमा केही अलमल भइरहेको उनले बताए। ‘घटना जटिल र निक्कै गम्भीर छ। अहिलेसम्म कुनै निस्कर्ष निस्कन सकेन,’ बीसीले भने, ‘धैर्यता र संयमता अपनाऔं। जतिसक्दो चाँडो हत्यारा पत्ता लगाएर घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गरिने छ ।’
सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती थपिने भएकाले यस्ता जघन्य अपराधको अनुसन्धान प्रहरीको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने उनले बताए। ‘अनुसन्धान शून्यबाट सुरु हुन्छ। सतप्रतिशत नतिजा नआएसम्म केही भन्न सकिँदैन,’ बीसीले भने ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीएसपी रामजी कटुवाल हत्यारा लुक्नसक्ने सम्भावित क्षेत्रमा प्रहरीको पहुँच तत्काल पुग्नुपर्ने बताउँछन्। ‘प्रहरीले अनुसन्धानमा प्रविधिको व्यापक सहारा लिनुपर्छ। सोधपुछ र अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि र स्थानीयको साथले प्रहरीलाई ठूलो सहयोग पुग्छ। जघन्य अपराधमा प्रहरीले बढो संवेदनशिल हुनुपर्छ ।’
कटुवालका अनुसार घटनाको संलग्नताको पाटोले ठूलो महत्व राख्छ। ‘बाहिरका वा वरपरकै मान्छेका संलग्नता छभन्ने कुराको पहिचान हुनसक्यो भने अनुसन्धान चाँडो निस्कर्षमा पुग्छ,’ उनले भने, ‘बाहिरका मान्छे हुनसक्ने सम्भावना भएमा राजमार्गका प्रहरी युनिटले राखेका गाडीका रेकर्डको पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ ।’ त्यसरी विश्लेषण गर्दा कुन गाडी के कामले कहाँसम्म गएका हुन्भन्ने पत्ता लाग्ने उनले बताए। राजमार्गका ठूला बजारमा जडान गरिएका सीसी क्यामेरा फुटेजको मद्धतले पनि त्यस्ता सवारी साधनको प्रवेशलाई नियाल्न सकिने कटुवाल बताउँछन् ।
शंका लागेका व्यक्तिका बारेमा तत्काल खबर गर्नसक्ने गरी सबैको पहुँचमा पुग्नलाई अनुसन्धानकर्ताहरुको सम्पर्क नम्बर पनि सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको विश्लेषण छ। साथै प्रमाण संकलनलाई बढी ध्यान दिँदा अनुसन्धान चाँडो निस्कर्षमा पुग्न सक्ने कटुवालले बताए ।
मादी नगरपालिका-१ खोलागाउँको उम्लिङमा भएको उक्त हत्याकाण्ड अहिले देशभरी नै चासो र चर्चाको विषय बनेको छ। ८५ वर्षीय बौदमान कार्कीको परिवार नै सखाप बनाउने गरी दर्दनाक घटना गराइएको छ। घरमा रहेका ७ जनामध्ये वृद्ध अवस्थाका उनी मात्रै सकुशल भेटिएका छन्। बौदमानकी पत्नी ८४ वर्षीया पार्वता कार्की, छोरा ५८ वर्षीय तेजबहादुर कार्की र तेजबहादुरकी पत्नी ५२ वर्षीया कमला कार्की, बुहारी ३२ वर्षीया रञ्जना कार्की र नातिनातिना ११ वर्षीय दीपेन र ७ वर्षीया गोमा कार्कीको हत्या भएको हो।
गत सोमबार बिहान घर आसपासमा छरपस्ट शवहरु भेटिएका थिए। बर्बरतापूर्वक घटना कति बेला गराइएको हो भन्ने थाहा पाउन पोष्टमार्टम रिपोर्ट नै कुर्नुपर्ने भएको छ। घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा लखेटीलखेटी हत्या गरेजस्तो देखिने प्रहरीले जनाएको छ। सबै मृतकको टाउकोमा पछाडिबाट कुनै बस्तुले जोडले प्रहार गरिएको पाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान र स्थानीयको आशंकाले पनि मेल खाएन। बौदमानको परिवारले झापामा जग्गा किनेर पास गराउने तयारी गरेको खुलेको छ। हत्या गरेर जग्गा किन्न घरमा राखिएको पैसा डकैती गर्न खोजिएको शंका स्थानीयको थियो। तर आठ लाख ८८ हजार रूपैयाँ नगद र गरगहना घरभित्रै सुरक्षित फेला परेपछि आर्थिक पाटोबाट गरिएको शंकासँग अनुसन्धान मेल नखाएको बताइन्छ। यद्यपि आर्थिक एवं विभिन्न प्राविधिक पाटोबाट अनुसन्धान तथा हत्याराको खोजी जारी राखिएको बीसीले बताए ।
Prevराजनीतिमा ठूलो परिवर्तन : देउवा र ओली मिलेर गदैछन् यस्तो निर्णय, गठबन्धन भत्किने
Nextयस्ता पनि पत्रकार, पत्रकारीताको नाममा के के हुने रैछ ? (भिडियो हेर्नुस्)
एकसाथ जन्मिएका यि जुम्ल्याहा इन्जिनियर दाजुभाईलाई कोरोनाले सँगै लग्यो